» बीपीको सशस्त्र विद्रोहको बल, बेवारिसे गोल, सबैलाई रेड कार्ड
बीपीको सशस्त्र विद्रोहको बल, बेवारिसे गोल, सबैलाई रेड कार्ड
नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा एक रोमान्टिक राजनीतिक स्टन्टजस्तो बनेको देखिन्छ । २००७ सालमा राणा विरोधी सशस्त्र सङ्घर्ष बीचमै तुहियो दिल्ली सम्झौतामा पुगेर । यद्यपि त्यसले १०४ वर्षे जहानिया“ राणा शासन विधिवत् रुपमै समाप्त गरिदिएको थियो । त्यो आन्दोलन कुन परिवेशमा भएको थियो भन्ने कुरालाई नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदिप गिरिले रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘सशस्त्र सङ्घर्षलाई सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता धनराशीको पर्ने गर्दछ । त्यो फगत घोषणा नभएर बलिदानसगै खर्चको बेलगाम यात्रा पनि हो । ‘२००७ र २०१८ को सशस्त्र क्रान्ति सुवर्ण शमशेरकै पैसामा भएको थियो’ (उही : ४४) । तर पछिल्लो (बीपीले घोषणा गरेको –ले.) सशस्त्र सङ्घर्षमा पैसाको अभावपूर्ति गर्न व्यक्तिगत लुटपाटदेखि हवाइजहाज अपरहणसम्म गरिएको थियो ।
बीपी कोइरालाको निर्देशन र गिरिजाप्रसाद कोइारालको प्रत्यक्ष योजनामा वि.सं. २०३० जेठ २८ गते विराटनगरबाट काठमाडौ“ जाने विमान दुर्गा सुवेदीहरुले अपहरण गरी भारतको फारिबीसगन्ज लगी ३० लाख भारु लुट्न सफल भएका थिए । त्यसैका बलमा २०३१ पुस १ गते ओखलढुङ्गा कब्जा गर्ने योजना पञ्चायती व्यवस्थाले कार्यान्वयन नहुदै असफल बनाइदिएपछि कोइरालाको सशस्त्र सङ्घर्ष अलपत्र परेको दुर्गा सुवेदीको दाबी छ ।
(कंडेलद्धारा लिखित अवतरण (नेपालमा सशस्त्र संघर्ष, रुपान्तरणमा विवाद र एमाले–माओवादी एकता) नामक पुस्तकबाट । पुस्तकको लोकार्पण २०७५ असोज २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट हुने कार्यक्रम छ )